NVIDIA နှင့် AMD ၏ (ATI RADEON) မြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်းလုပ်နည်း - ဂိမ်းပြဿနာများ - 2019
ဗီဒီယိုကဒ်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်းမှအများစုကိစ္စများတွင်, ဂိမ်းကစားရောကျလာ: ကောင်းသောအရှိန်လျှင် - ထို FPS (တစ်စက္ကန့်ဘောင်) တိုးပွားစေပါသည်။ ကြောင့်ဒီရန်, ဂိမ်း၏ပုံရိပ်ကပိုချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်လာ, ဂိမ်းကစားနှေးကွေးမှတာတွေရပ်စဲတစ်ဦးအဆင်ပြေနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဖြစ်လာသည်။
တခါတရံမှာမြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်း 30-35% (:) overclocking ကြိုးစားရန်သိသိသာသာတိုး) ကိုစွမ်းဆောင်ရည်တက်တိုးတက်စေနိုငျပါသညျ! ဤဆောင်းပါး၌ငါသည်ဤအမှုကိုပြုနှင့်ဤအမှု၌ပျေါပေါကျကြောင်းကိစ္စများအမျိုးအစားများဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်အာရုံစိုက်ချင်ပါတယ်။
ရုံငါချက်ချင်းမှတ်သားချင်တယ် - ပျံ့နှံ့အရာအရည်အချင်းမရှိတဲ့လုပ်ရပ်များမှာဘေးကင်းလုံခြုံမဟုတ်ပါဘူး (အပြင်ကအာမခံပယ်ပါလိမ့်မယ်!) အဆိုပါပစ္စည်းကိရိယာများကိုပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ သင်ဤဆောင်းပါးအပေါ်ပြုကြလိမ့်မည်သမျှသော - သင့်ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာပြုပါ ...
အကောင်းဆုံး setting များကိုယာဉ်မောင်း setting အားဖြင့် - ထို့အပြင်ဖြိုခွဲမီ, ငါကဗီဒီယိုအရှိန်မြှင့်ဖို့နောက်ထပ်နည်းလမ်းအကြံပြုချင် (အဲဒီ settings တွေကိုတောင်းဆိုနေတာ - ။ ပြီးတော့မြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်းဘာမှမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ် - သင်တို့သည်အလျှင်းမအန္တာရာယ်ကြောင့်အဲဒီ settings တွေကို setting များကဖြစ်နိုင်) ။ ဒီအကြောင်းကိုငါ့ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာဆောင်းပါးစုံတွဲတစ်တွဲရှိတယ်:
- NVIDIA (GeForce) အတွက်:
- AMD ၏ (ATI Radeon) အတွက်:
ကျွန်တော်ဂရပ်ဖစ်ကတ်များ overclocking များအတွက်အစီအစဉ်များလိုအပ်ကဘာလဲ
ယေဘုယျအားဖြင့်, ဒီမျိုး၏ tools တွေကိုအလုံအလောက်ဖြစ်ကောင်းမဟုတ်ဘဲအများဖြစ်ကြ၏, သူတို့အားလုံးစုဆောင်းရန်တဦးတည်းဆောင်းပါး :) ။ ထို့အပြင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်နိယာမနေရာတိုင်းအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်: အ memory နဲ့ core ကိုနာရီနှုန်းကိုတိုးမြှင့် (အဖြစ်ပိုကောင်းအအေးများအတွက်အေးမြန်နှုန်း add) ရန်ရှိသည်မှကျွန်တော်တို့ကိုအတင်းရန်။ ဤဆောင်းပါး၌ငါမြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်းအဘို့အလူကြိုက်အများဆုံး utilities အချို့အာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။
မြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်းအပါအဝင်ဒဏ်ငွေ-ညှိ NVIDIA နှင့် ATI Radeon ဖို့အကောင်းဆုံး tools တွေ, တစ်ခုမှာ! ယင်း utility ကိုအတော်လေးတစ်ဦးအနေဖြင့် updated ရသေးဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း၎င်း၏လူကြိုက်များနှင့်အသိအမှတ်ပြုမှုကိုဆုံးရှုံးမထားပါဘူး။ Real-time ပန်ကာမြန်နှုန်းကို enable သို့မဟုတ်ဝန်ပေါ် မူတည်. တော်လှန်ရေးများ၏ရာခိုင်နှုန်းအရေအတွက်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်: အပြင်ကအေး setting ကိုရှာတွေ့မှဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးမော်နီတာ setup ကိုရှိပါတယ်: တစ်ဦးချင်းစီကိုအရောင်ရုပ်သံလိုင်းအဘို့အတောက်ပဆန့်ကျင်ဘက်, gamma ။ သင်တို့သည်လည်းဒါပေါ်တွင် OpenGL settings ကိုနှင့်ထံမှထွက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
developer များ: //www.entechtaiwan.com/
PowerStrip (program ကိုပြတင်းပေါက်) ။
ဗီဒီယိုကို subsystem သို့ configuration ကို parameters တွေကို, ချောညှိသူတို့ရဲ့ဂရပ်ဖစ်ကဒ်နှင့်မြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်းအဘို့အဦးလူသိများတဲ့ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂါရပ်အသုံးအဆောင်များအချို့သည်: Resolution, အရောင်အတိမ်အနက်, အရောင်အပူချိန်, အရောင်အဝါများနှင့်ဆနျ့ကငျြဘညှိ, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အရောင် setting များကိုအမျိုးမျိုးအစီအစဉ်များကိုတာဝန်ပေးဖို့, etc "ဟုအဆိုပါယင်ကောင်ပေါ်တွင်" switch ကို
အဆိုပါ NVIDIA အသုံးအဆောင်များ
NVIDIA System Tools (ယခင် nTune ခေါ်)
, BIOS ကနေတဆင့်အတူတူပါပဲလုပ်နေတာထက်အများကြီးပိုလွယ်ဖြစ်သော Windows တွင်အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေ control panel ထဲက၏အကူအညီနှင့်အတူအပူချိန်နှင့်ဗို့အား၏ထိန်းချုပ်မှုအပါအဝင်တစ်ဦးကိုရယူသုံးဘို့ကိရိယာအစုံ, စောင့်ကြည့်မှုများနှင့်ကွန်ပျူတာ system ကိုအစိတ်အပိုင်းများဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ။
NVIDIA စစ်ဆေးရေး: main program ကိုပြတင်းပေါက်။
သငျသညျစနစ် NVIDIA ဂရပ်ဖစ် Adapter ကတပ်ဆင်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်အမျိုးမျိုးတို့ကိုရယူနိုငျသောအတူအခမဲ့သေးငယ်တဲ့ utility ကို။
EVGA Precision X ကို
ယင်းအရှိန်နှင့်အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ဗီဒီယိုကတ်များညှိဘို့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အစီအစဉ်။ အဆိုပါ Nvidia chip ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးကုမ္ပဏီ၏ EVGA နှင့်လည်း GeForce GTX titan, 700, 600, 500, 400, 200 ကနေဂရပ်ဖစ်ကတ်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
AMD ၏ GPU ကိုနာရီ Tool ကို
အဆိုပါ GPU ကို Radeon အပေါ်အခြေခံပြီးဂရပ်ဖစ်ကဒ်စွမ်းဆောင်ရည်မြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်ဖို့ utility ။ ယင်း၏လူတန်းစားအတွက်အကောင်းဆုံးတစ်ခုမှာ။ သင်ပြုသင့်ရဲ့ဗွီဒီယိုကဒ်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်းလိုပါက - ငါသူမ၏အတူကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာကိုစတင်ရန်အကြံပြု!
MSI Afterburner ။
AMD မှမြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်းနှင့်လိုသလိုကတ်များများအတွက်တစ်ဦးကလုံလုံလောက်လောက်အစွမ်းထက် utility ကို။ အဆိုပါအစီအစဉ်သည်ဗို့အား GPU ကိုနှင့်မှတ်ဉာဏ်တန်ခိုး, core ကိုအမြန်နှုန်း, ပန်ကာမြန်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ညှိနိုင်ပါတယ်။
ATITool (အဟောင်းကတ်များကို support)
ATI Tray ထဲက Tools များ။
AMD ၏ ATI Radeon graphics ကိုကတ်များ tweaking နှင့် overclocking များအတွက်ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့ရှိသမျှသည်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုမှအမြန်ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးခြင်း, စနစ်ဗန်းထဲမှာတည်ရှိပါတယ်။ Windows OS အောက်တွင်ပြုလုပ်ပြေး: 2000, XP, 2003, Vista,7။
သူတို့ဖြိုခွင်းစဉ်နှင့်အပြီးဂရပ်ဖစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်အကဲဖြတ်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်အဖြစ်ကိုသင့်ရဲ့ PC များ၏တည်ငြိမ်မှုကိုစစျဆေးဖို့။ မကြာခဏအရှိန် (တိုးပွားလာအကြိမ်ရေ) စဉ်အတွင်းကွန်ပျူတာမတည်မငြိမ်ပြုမူဖို့စတင်သည်။ မူအရ, ထိုကဲ့သို့သော program တစ်ခုအဖြစ်ဥပမာ - အဘို့, အရာများအတွက်, သင့်အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းဖြစ်, နှင့်သင်သင်၏ video card ကိုမြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်းမှဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
ဗီဒီယိုကိုစမ်းသပ်မှု (testing အတွက် utility ကို) -
အရေးကြီး! သင်၏ video card ကို driver ကိုအရှိန်နှင့် DirectX ကို :) update လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။
1) utilities ကို install နှင့်အပြေးပြီးနောက် riva ဖမ်းစက်အဓိက window ကိုကို (ပင်မ) ၌၎င်း, pop-rectangular ပြတင်းပေါက်၌သင်တို့၏ဂရပ်ဖစ်ကဒ်၏နာမကိုအမှီအောက်ရှိတြိဂံပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ, (ဗီဒီယိုတစ်ကားကိုကဒ်၏ပုံရိပ်နှင့်အတူ) ပထမ button ကို select လုပ်ပါ။ အောက်ပါပုံရိပ်ကြည့်ရှုပါ။ ထို့ကြောင့်, သင်အေးစစ်ဆင်ရေး setting, အတွက် configuration memory နဲ့ core ကိုကြိမ်နှုန်းဖွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။
မြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်းများအတွက် setting များကိုစတင်နေသည်။
2) ယခုသင်သည် (အောက်ကပုံ 700 နှင့် 1150 MHz ဖြစ်ပါတယ်) မှတ်ဉာဏ်နာရီနဲ့ GPU core ကို Overlocking တစ် tab ကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်။ frequency ကိုအရှိန်မြှင့်မယ့်အခါ, တစ်ဦးအခြို့သောကန့်သတ်နိုင်ဖို့တိုးလာနေပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင်ဖို့လိုအပ်:
ကားမောင်းသူ-Level ဟာ့ဒ်ဝဲမြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်း Enable ပစ္စည်းကို tick;
pop-up window ကို (ပြမပါ), ရိုးရှင်းစွာယခုထောက်လှမ်း button ကို click နှိပ်;
prvom ထောင့်ထိပ်, စွမ်းဆောင်ရည် 3D setting အပိုင်းကိုရွေးချယ်ပါ (ကို default setting ကို 2D တခါတရံထိုက်သည်);
အခုဆိုရင်သင်ကြိမ်နှုန်းတိုးမြှင့် (သို့သော်မရလျင်ရှိနေစဉ်လုပ်!) မှညာဘက်ကိုကြိမ်နှုန်းဖို့လျှောရွှေ့နိုင်ပါတယ်။
3) နောက်တစ်ဆင့် - သင်အမှန်တကယ်အချိန်အတွင်းအပူချိန်စောင့်ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုမဆို utility ကို run ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေဖြင့်ဆောင်းပါးကနေမဆို tool ကို select လုပ်နိုင်သည်
ယင်း utility ကို PC မှာ Wizard ကို 2013 ကနေပြန်ကြားရေး။
ထိုသို့သော utility ကိုပိုမိုမြင့်မားကြိမ်နှုန်းမှာအချိန်ဂရပ်ဖစ် (၎င်း၏အပူချိန်) ၏ပြည်နယ်စောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်။ အများအားဖြင့်, ဤကိစ္စတွင်အတွက်ကဒ်အမြဲပိုပြီးတက်နွေးဖို့စတင်သည်နှင့်အမြဲတမ်းအေးစနစ်ဝန်ကိုကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဘူး။ အချိန်အတွက် (ဘာမှလျှင်) ၏ပျံ့နှံ့ရပ်တန့်ရန် - က device ကို၏အပူချိန်ကိုသိရန်လိုအပ်ပေသည်။
(ပထမ, များသောအားဖြင့်မှတ်ဉာဏ်မြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်းသတိပြုပါ, ပြီးတော့အတူတကွနျူကလိယ၏ကြိမ်နှုန်းတိုးမြှင့်အကြံပြုသည်မဟုတ်), ဥပမာ 50 MHz နှင့် settings ကိုကယ်တင် - 4) ယခုညာဘက် Riva ဖမ်းစက်များတွင်ကြိမ်နှုန်းမှတ်ဉာဏ် (Memory ကို Clock) ရန် slider ကိုရွှေ့။ ။
ထို့နောက်စမ်းသပ်ဖို့ go: သင်၏ဂိမ်းကို run ကြောင့်ထဲမှာ FPS ကိုတွေ့မြင် (အဖြစ်ဝေးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်အဖြစ်), သို့မဟုတ်အထူးကိုအသုံးဖြစ်စေ။ ပရိုဂရမျ:
စကားမစပ်အဲဒီအကြောင်း FRAPS utility ကို (အသေးစိတ်နှင့်အတူစောင့်ကြည့်ဖို့အဆင်ပြေ FPS ပမာဏကိုဤဆောင်းပါး၌တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်:
နှင့်မျှမတို့အပိုငျးအ - - ဂိမ်းအရည်အသွေးပုံထားလျှင် 5), အပူချိန်ဟာကန့်သတ်တန်ဖိုးများ (အပူချိန်ကတ်များထက်မပိုပါဘူး။ Riva ဖမ်းစက်များတွင်နိုင်သလားလာမည့် 50 MHz များအတွက်မှတ်ဉာဏ်ကြိမ်နှုန်းတိုးမြှင့်, ပြီးတော့ဒါပါဘူးနေသမျှကာလပတ်လုံးပုံဖြစ်လာပါဘူးအဖြစ်ထပ်မံခွဲစိတ်စမ်းသပ်ဖို့ ပို့တ် (များသောအားဖြင့်အနည်းငယ်ခြေလှမ်းများပြီးနောက်သိမ်မွေ့ပုံပျက်ပုံထဲမှာရှိပါတယ်, ပြီးတော့သူကမျှမသဘာဝကျပါတယ်လူစုခွဲ ... ) ။
6) သင်ကကန့်သတ်တန်ဖိုးကိုမှတ်ဉာဏ်ကရေးလိုက်, အဲဒီနောက် core ကိုကြိမ်နှုန်း (Core Clock) ကိုတိုးမြှင့်သွားပါရှာတွေ့သည့်အခါ။ ဒါဟာတူညီတဲ့လမ်းဖြစ်သင့်လူစုခွဲ: (။ သို့မဟုတ်အထူး tool ကို) ဂိမ်းထဲမှာတစ်ဦးချင်းစီအချိန်စမ်းသပ်နေဖြင့်တိုးမြှင့်ပြီးနောက်တူညီတဲ့သေးငယ်တဲ့ခြေလှမ်း။
သူတို့ကိုကယ်ဖို့ - သင့်ရဲ့ဂရပ်ဖစ်ကဒ်များအတွက်ကန့်သတ်တန်ဖိုးများကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာ။ ဖွင့် - အခုတော့သင်ကွန်ပျူတာ (အောက်ပါပုံရိပ်ကြည့်ရှု, Window startup မှာ overclocking Apply အထူးကို tick လည်းမရှိ .. ) လာသောအခါဗီဒီယို, အစဉ်အမြဲတက်ကြွခဲ့ကြအဲဒီ settings တွေကိုမှ startup ထဲမှာ Riva ဖမ်းစက်ပေါင်းထည့်နိုင်ပါတယ်။
အကြိုက်ဆုံးမြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်း setting များကိုသိမ်းဆည်းနေသည်။
တကယ်တော့သောသူအပေါင်းတို့ပါပဲ။ ငါသည်လည်းအောင်မြင်သောမြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်းများအတွက်ဂရပ်ဖစ်ကဒ်နှင့်၎င်း၏အာဏာကို (တစ်ခါတစ်ရံ power supply မလုံလောက်ပါပါဝါအရှိန်မြှင့်လာသောအခါ) ၏ကောင်းသောအအေးစဉ်းစားရန်လိုအပ်သောကြောင်းကိုသင်သတိပေးချင်တယ်။
မိမိကိုမိမိစုစုပေါင်းနှင့် overclocking သည့်အခါသင်၏အချိန်ယူပါ!
ဗီဒီယို Watch: PUBG Mobile with Bluestacks3on Intel HD Graphics. 4GB RAM. Will it iGPU? (သြဂုတ်လ 2019).